ရဲရင့်သက်ဇွဲ – သံမဏိလူသား ပြည်သူကြားမှာ | MoeMaKa Burmese News & Media
Thit Kaung Eain - Ko Nya Gyi Poem
Ba Kyaw (Ma Gway) - Here Say Poem
ရဲရင့်သက်ဇွဲ ● ကြောင်တွေဟာ သွားကြားထိုးတံ ဆောင်မထားကြဘူး
ရဲရင့်သက်ဇွဲ - သမိုင်းစစ်စစ်များအကြောင်း
ရဲရင့်သက်ဇွဲ - သံမဏိလူသား ပြည်သူကြားမှာ
ရဲရင့်သက်ဇွဲ – သံမဏိလူသား ပြည်သူကြားမှာ
ဘယ်မှာရှာရမှာတုန်း အဘရဲ့ ….
ရှားရှားပါးပါး လက်ချိုးရေတွက်လို့ ရတဲ့အထဲ
အဘဦးဝင်းတင်ဟာ ပြည်သူချစ်တဲ့ ခေါင်းဆောင်ကောင်း
အဘဦးဝင်းတင်ရဲ့သံမဏိစိတ်ဓာတ်ကတော့
ပြည်သူတွေနှလုံးသားမှာ ထာဝရရှင်သန်နေခဲ့ပြီ. ….
အလားတူ စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာ စာများ၊ ဆောင်းပါးများ ...:Poems, ရဲရင့်သက်ဇွဲ